Izindaba - I-Aquaculture - isidingo esandayo siletha amathuba amakhulu
I-aquaculture - isidingo esandayo siletha amathuba amakhulu
Imboni yezolimo zasemanzini ibilokhu ikhula futhi iguquka ngokushesha okukhulu. Namuhla, i-aquaculture ibanga amaphesenti ama-50 ezinhlanzi ezidliwe emhlabeni jikelele. Ukuthembela ekufuyweni kwasemanzini kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokwanda, ngezikhathi eziningana izinga lokukhula lokunye ukukhiqizwa kwenyama. Lokhu kwethembela ekukhuleni kwasemanzini kuveza amathuba amakhulu, kepha futhi kwandisa ubungozi kubakhiqizi.
Njengoba ingcindezi yokwandisa isivuno sesivuno ikhula, ukukhathazeka kuyakhula ngemithelela yezinhlelo ezivulekile zasemanzini emvelweni nasezinhlotsheni zasendle ngenxa yezifo nokwanda kokukhiqizwa kwemfucuza. Ngasikhathi sinye, izinhlanzi nezimbaza ezikhuliswe ezindaweni ezivulekile zisengozini yokungenwa yizifo ezikhona endaweni engokwemvelo, futhi kumele zincike emifuleni noma olwandle ukuze kuthathe imfucuza futhi kugcinwe izimo ezifanele. Kusebentisa tindlela letiphatsekako tekuvikela kuvikeleka lokudzingekako kuvikela tinhlobo temvelo kanye nekuvikela imvelo lengabi nasifo kute sitjalo lesiphilile kulukhuni etinhlelo letivulekile. Lezi zinto zikhulise ukufunwa kwezinhlelo ezisuselwa emhlabeni ezahlukanisa izinhlanzi ezifuywe nezimbaza ezivela kozakwabo basendle.
Izinhlelo ezivaliwe, amasistimu asuselwa kumathangi njenge-Re-circating Aquaculture Systems (RAS) noma izinhlelo ezigelezayo, ahlinzeka ngokwahlukana nezinhlobo zemvelo futhi avumela ukukhiqizwa okwandisiwe ezikhungweni zezolimo. Lezi zinhlelo eziqukethe zenza kube lula ukudala izimo ezifanele zempilo yezitshalo, ukuthuthukisa isivuno kanye nekhwalithi. I-RAS isebenzisa ngisho namanzi amancane.
Inqubo ephephile, esimeme, engabizi ngokulawula okuphelele - eyenziwe lula.
Isikhathi Iposi: Jul-21-2020